Maka acupuncture Maka ashma - Eziokwu ka ọ bụ akụkọ ifo? - The eke HD
1 Maka acupuncture Maka ashma - Eziokwu ka ọ bụ akụkọ ifo?
2 Upkpuchi acupuncture ọ si bido.
3 N'ezie, nnukwu ajụjụ bụ, acupuncture ọ na-arụ?
4 Maka acupuncture Maka ashma - Eziokwu ka ọ bụ akụkọ ifo? Mmechi.
5 Njikọ posts:
Ma ọ bụrụ na ị na-arịa ụkwara ume ọkụ, ọ nwere ike iyi n'oge ụfọdụ na ihe ọ bụla - ọbụlagodi ihe omimi dị ka ị na - eme acupuncture - kwesịrị ịnwale. Iku ume bu ihe nke otutu ka anyi ghara iche.
Ọ bụ usoro amaghị ama na ọ gwụla ma anyị na-arịa ọrịa, anyị nwere ike inweta oxygen dị anyị mkpa.
Mana maka ndị nwere ashma, iku ume na - adị n'uche ha. Enwere ohere mgbe niile na mwakpo ashma ga-ahapụ ha ịnwụ ikuku.
Lelee vidio a dị mkpirikpi na-akọwa ụzọ ị ga - esi jiri acupuncture na-enweghị mkpụmkpụ ma nweta ahụ efe n'ụlọ site na mgbu siri ike na ọrịa ndị a na-ahụkarị na ihe dị ka minit 3 kwa ụbọchị!
Ọ bụrụ n’ị onụ ọgwụ kwa ụbọchị,
nke a nwere ike inyere gị aka
N’oge ụfọdụ, mwakpo ndị a ga-ebu amụma ma ha adịghị adị, mgbe ụfọdụ ha na-pere mpe ma na-adị mfe ilekọta ya, na mgbe ụfọdụ afọ na-arịa ụkwara ume ọkụ n’ọnọdụ ụlọ mberede.
Ọ bụ ihe ijuanya na ụfọdụ ndị na-arịa ụkwara ume ọkụ aghọọla iji acupuncture maka ashma.
ụkwara ume ọkụ bụ ọrịa na-adịghị ala ala na enweghị ọgwụgwọ. E nwere ụdị ashma dị iche iche, mana ha niile na -eme otu ụdị akara na akara: iku ume ngwa ngwa, ọsụsọ, obi ọgbụgba ọsọ, yana obi mgbawa na-enweghị isi.
Amaghị ihe kpatara ọrịa ashma (enwere ike inwe mkpụrụ ndụ ihe nketa na ọrụ), mana enweghị mgbagha na ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi - oyi, uzuzu, mmetọ, wdg - na-akpata mwakpo ahụ.
N'oge mwakpo ahụ, ọnya na mgbochi nke akụkụ okuku ume na -egolata oke ikuku nwere ike ịkụnye, mwakpo ahụ nwere ike ịdịru oge ma ọ bụ awa ole na ole ma dịka anyị kwuru na mbụ, enweghị ọgwụgwọ.
Mana n’agbanyeghi na enweghi ogwugwo, enwere ndi n’iile n’iru icho uzo eji aru aru ohuru, enwere ndi dibia na ndi oria ndi kwenyere na acupuncture maka ashma bu azịza ya.
Upkpuchi acupuncture ọ si bido.
Acupuncture (okwu ahụ sitere na okwu Latin acus, nke pụtara agịga, na pungere, nke pụtara punch) bụ usoro ọgwụ ochie.
Amabeghị ebe acupuncture sitere na ya, mana ya na China nwere njikọ chiri anya.
Na iji acupuncture, a na-etinye agịga dị warara banye na anụ ahụ (naanị ịbanye na elu) na isi ihe ụfọdụ na ahụ.
Ekwuru na agwara na-edozi mmejọ ahụ na ahụ ike nke anụ ahụ, mmekpa ahụ a sịrị na ọ bụ ya kpatara ọrịa.
Omenala, ọgwụ ndị Western nwere ọtụtụ echiche banyere etu acupuncture si arụ ọrụ (dịka, ọ nwere ike ịkwalite mwepụta nke ndị na - akwụsị ihe mgbu, endorphins) mana akabeghị nkọwapụta etu acupuncture si arụ ọrụ.
N'ezie, nnukwu ajụjụ bụ, acupuncture ọ na-arụ?
Iji acupuncture ọ nwere ike ịgwọ ọrịa asthma? Ọ dị mma, n'adịghị ka nchọta maka nkọwa maka otu esi ashma na-arụ ọrụ, azịza ndị a edoghị anya - ha dabere na onye ị jụọ.
Dabere na ndị acupunctur ọdịnala si kwuo, ee, iji ọgwụ ụkwara ume arụ ọrụ bụ ọgwụgwọ dị mma, ọkachasị na-arịa ụkwara ume ọkụ na ụmụaka.
Enwere ọtụtụ mkpokọta weebụsaịtị na ọtụtụ puku akaebe niile na-agba akaebe na ịdị irè acupuncture dị ka ọgwụgwọ maka ashma.
Ha na-ekwu na iji acupuncture arụ ọrụ ebe ọ nweghị ihe ọzọ.
Ma jụọ otu ajụjụ a - ọ na-eme acupuncture maka ọrụ ụkwara ume ọkụ - nke ndị dọkịta na ndị ọkà mmụta sayensị zụrụ azụ na usoro ọgwụgwọ ọdịnala, Western na usoro sayensị, azịza ya ga-adị nnọọ iche.
Ha kwuru na iji ọgwụ akịlị dị ka ihe na-atọ ụtọ, mana ajụjụ banyere etu ọ si arụ ọrụ adịghị mkpa karịa ajụjụ a na-arụ ya, azịza ha na nke ahụ abụghị.
Maka acupuncture Maka ashma - Eziokwu ka ọ bụ akụkọ ifo? Mmechi.
Enweghi ihe akaebe doro anya na acupuncture maka oru ashma, na nyocha nke ihe omimi sayensi nke gbaliworo ịza aju achoputaghi acupuncture bu ezigbo ihe eji agwọ oria.
Ọ bụrụ na enwere akụkọ na ọ na-arụ ọrụ, enwere ike ịkọwa ndị a site na nsonaazụ placebo.
Mmetụta ahụ na - ekwu na ọgwụ nwere ike ịnabata ọgwụ ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ / usoro ahụike ka ọ dị mma n'ihi na ha kwenyere na ha dị irè, mana enweghị mmetụta ọ bụla.
Ya mere, iji acupuncture nwere ike inyere onye na-arịa ụkwara ume ọkụ aka n'ezie? Nke ahụ yiri ka ọ dabere n'echiche gị.
Ọ bụrụ na ị chere na ọrịa na-ebute site na ndagharịa na ntopute nke ike na ị kwenyesiri ike site na akụkọ gbasara azịza, nanị azịza ezi uche dị na ya bụ: nwalee ya ma chọpụta
Upkpachara afọ iji gwọọ ọrịa asthma dị mma; mmetụta ọjọọ dị oke njọ adịkarịghị ahụkebe.
Ma ọ bụrụ na ị bụ ụdị mmadụ chọrọ ihe akaebe n'echiche ọdịnala, ọ nwere ike ịba uru karịa ịrapagidesi ike na ọgwụgwọ ị na-ewere ma gaa n'ihu na-achọ ihe akaebe siri ike na acupuncture nwere ike inye aka lebara ashma gị.
Ihe na Acupressure, Acupressure Maka ụkwara ume ọkụ, igba okpukpu, Ọgwụ acupuncture Maka ashma, ụkwara ume ọkụakpado enyemaka acupressure ashma, acupressure maka ashma, acupuncture maka ashma, acupuncture maka ashma na ahu, acupuncture maka eziokwu ashma ma obu akụkọ ifo, acupuncture maka ọgwụgwọ ashma
Acupuncture - Fastgbapụ ọsọ ọsọ Site na Infertility
Ngwọta Ahụ Na-adịghị Ala Maka Insomnia
Acupunture na Acupressure: bzọ Ejikọtara Ọhụụ
Lee vidio a dị egwu, anya na-emeghe…
Ọ na - egosi gị otu ị ga - esi gwọọ ihe ọ bụla metụtara ahụike - nke pụtara na naanị nkeji 3 kwa ụbọchị.
>> Ihe osise ogbara ohuru emechaputara ka emee ya n’ụlọ <<
Ihe karịrị ijeri mmadụ 1 tụkwasịrị obi na ụdị ọgwụgwọ a sitere n'okike na-arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị afọ 2500.